Tababare Zinedine Zidane oo shaaca ka qaaday waxa uu u baahan yahay Eden Hazard si uu dib ugu helo qaab ciyaareedkiisii cajiibka ahaa – Gool FM
Tababare Zinedine Zidane oo shaaca ka qaaday waxa uu u baahan yahay Eden Hazard si uu dib ugu helo qaab ciyaareedkiisii cajiibka ahaa
Haaruun December 31, 2020
(Madrid) 31 Dis 2020. Tababaraha kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa daaha ka rogay waxa uu u baahan yahay Eden Hazard si uu dib ugu helo qaab ciyaareedkiisii cajiibka ahaa ee lagu yaqaanay.
Zidane ayaa ka hadlay dib ugu soo laabashada Eden Hazard ee Kooxda Real Madrid kulankii ay booqdeen Elche oo ay barbaraha la soo galeen xalay ee ka tirsanaa horyaalka La Ligaha Spain.
Hoggaamiyaha reer France ee Zinedine Zidane ayaa sheegay in Eden Hazard uu u baahan yahay kaliya waqti si uu dib ugu soo laabto qaab ciyaareedkiisii ugu fiicnaa, isla markaana uu ku soo bilowdo kulammada kaddib markii uu kursiga keydka ka soo kacay kulankii Elche.
Hazard ayaa ahaa bedel la isticmaalay kulankii xalay kooxda haysata horyaalka La Liga ay barbaro 1-1 la galeen Elche, kaddib markii uu Los Blancos uga maqnaa dhaawac bowadada ah tan iyo bishii November.
Xiddiga xulka qaranka Belgium, kaasoo ahaa bedel aan la isticmaalin kulankii Real Madrid ay la ciyaartay Granada ayaa xalay fursad u helay inuu kooxdiisa u ciyaaro 13 daqiiqo.
“Eden Hazard waxa uu u baahan yahay waqti, waxa uu u baahan yahay kulammo badan oo uu ciyaaro sidoo kale si tartiib tartiib ah ayuu ula soo qabsan doonaa, laakiin hubaashii waa uu ku soo laaban doonaa 11-ka koowaad ee safka hore,” ayuu Zidane u sheegay Suxufiyiinta.
“Waxaan u maleynayaa inay aheyd inaan dhalinno gool labaad qeybtii hore, maxaa yeelay si fiican ayaan u ciyaarnay, Elche waa ay dhib badnayd qeybtii labaad, laakiin waa inaan sii wadno dadaalkeenna iyo inaan u dhaqaaqno qaabkii aan dhawaanta sameynay, maxaa yeelay weli waxaa jira waxyaabo badan oo laga ciyaaro La Liga.” ayuu hadalkiisa ku daray macallin Los Blancos.
Kooxda Real Madrid ayaa lumaysay fursad ay ku barbarayn kartay dhibcaha kooxda hoggaaminaysa haatan horyaalka La Liga ee Atlético Madrid kaddib markii la soo gabagebeeyey shan kulan oo xiriir ah horyaalka oo ay guulo gaareen.
Kooxda cad-cad ee Madrid ayaa haatan fadhisa kaalinta labaad iyadoo leh 33-dhibcood, halka Atletico Madrid ay horyaalka La Liga ku hoggaaminayso 35-dhibcood.
Arsenal oo kula dagaalameysa kooxda Liverpool saxiixa xiddig ka ciyaara horyaalka Serie A
Kooxda Arsenal oo Tottenham kula tartamaysa saxiixa xiddig ka ciyaara horyaalka Bundesliga